မချို မြိန်သေးသည့် ကလောင်ပီတိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » မချို မြိန်သေးသည့် ကလောင်ပီတိ	27
မချို မြိန်သေးသည့် ကလောင်ပီတိ
Posted by မစုဥာဏ် on Aug 22, 2015 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 27 comments
ရေခဲမှတ်အောက် ရောက်အောင် အေးနေတဲ့ နယူးရောက် ဆောင်းတွင်းတနေ့ မှာ..လမ်းမတွေ ပေါ် ထူထူထဲထဲ ကျနေတဲ့ နှင်းတွေ ကို ဖိနှင်း၊ နှုတ်ကလဲ မြည်တွန်တောက်တီးပြီး Great Neck စာကြည့်တိုက်ကို လာခဲ့တဲ့ ကျွန်မ…. စာကြည့်တိုက်ထဲရောက်တော့ ရှက်မိပါရဲ့ ။ လားလား..အသက် ၂ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်ကျော် အထိ ကလေးတွေ ..မောင်မင်းကြီးသားလေးတွေ၊ မယ်မင်းကြီးမလေး တွေက ဒီလောက်အေးတဲ့ ဆောင်းတွင်းမှာ တောင် စာကြည့်တိုက်ကို အရောက်လာပြီး “ကလေးစာကြည့်ခန်း” မှာ အငြိမ့်သား စာထိုင်ဖတ်နေကြလေရဲ့ ။
အသက် ၂နှစ်လောက်ကလေးက စာဖတ်နိုင်ပါ့ မလားဆိုပြီး မေးချင်သူတွေ ရှိကြမှာပဲ။
ဟုတ်ကဲ့..စာမဖတ်တတ်တဲ့ ကလေးတွေ ဖတ်လို့ ရတဲ့ စာအုပ် “Picture books” တွေ ကိုထားပေးတဲ့ အတွက် သူတို့ လေးတွေ အရုပ်ကြည့်ပြီး စာဖတ်ကြပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ လူကြီးတွေ အတွက် သာမက ကလေးစာဖတ်ခန်း၊ကလေးကွန်ပျူတာခန်း၊ ကလေးအိမ်သာ၊ ကလေး စာအုပ်စင်၊ ကလေး ဆော့စရာ အခန်းဆိုပြီး သီးသန့် ထားပေးပါတယ်။ အသက် ၂နှစ်အရွယ်ကလေးတွေ ကိုင်မယ့် ကွန်ပျူတာထဲမှာ ကလေးသီချင်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ပုံပြင်ပြောပြတဲ့ ပရိုကမ်တွေထည့်ထားပေးသလို၊ သူတို့ သုံးမယ့် ကီးဘုတ်ကိုလဲ အရောင်လေးတွေနဲ့လုပ်ထားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာမတတ်သော်လည်း ကလေးတွေ ဟာ ကီးဘုတ်ပေါ်က အရောင်လေးတွေ နဲ့ နှိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာ ကို သုံးကြပါတယ်။
စာမဖတ်တတ်သေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ အတွက် ပုံကြည့်ပြီး ဖတ်လို့ ရတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဒီလို သီးသန့် ခွဲထားပါတယ်။
Picture Books for kids (photo: by Su Nyan)
ကလေးတွေအတွက် ရောင်စုံကီးဘုတ်ပါ။ (photo: Su Nyan)
ပြီးတော့.. သူတို့စာဖတ်တဲ့ စားပွဲတွေနားမှာ ဖတ်ချင်စရာကောင်းအောင် အရုပ်ပုံလေးတွေ ချိတ်ထားပေးပြီး၊ကလေးတွေ အတွက် ဆိတ်ငြိမ်သာယာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးထားတဲ့ အတွက် ဒီနိုင်ငံက ကလေးတွေဟာ စာကြည့်တိုက် ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက တွယ်တာကြပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်ထဲ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ တွေ ဟာ စာကြည့်တိုက် စည်းကမ်းကို လိုက်နာပြီး အသံ မမြည်အောင်၊ ဘေးကလူတွေကို အနှောက်မယှက် မဖြစ်အောင် နေတတ်ကြပါသေးတယ်။ ကလေးတွေဟာ စာကြည့်တိုက်ကို လာပြီး သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ ကြ၊ အတူတူ စာဖတ်ကြ နဲ့ အင်မတန်မှ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ လေးပါ။
အသက် ၂နှစ်ကနေ ၅နှစ်လောက် အထိ ကလေးတွေ သုံးဖို့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ခုံလေးတွေပါ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ရွာလေးတစ်ရွာရဲ့ လယ်ကွင်းတွေ ထဲမှာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် နွားကျောင်းနေရတဲ့ ကလေးတွေ ကို သွားမြင်ယောင်မိတယ်။ ကျွန်မ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ရွာကလေးမှာ ကလေးတွေ အတွက် မပြောနဲ့ လူကြီးတွေ ဖတ်ဖို့ စာကြည့်တိုက်တောင် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရွာမှာ ရှိတဲ့ တစ်ဆိုင်တည်းသော စာအုပ် အငှားဆိုင်လေးမှာ ကာတွန်းစာအုပ်တွေ ငှားငှားဖတ်ရင် လူကြီးတွေက ဆူတတ်လို့ခိုးခိုးပြီးဖတ်ရတာ ကို သွားပြီး သတိရ မိပါသေးတယ်။
ရွာလေးနဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာ က ကလေးအများစုဟာ..တနေ့ တနေ့ဝမ်းစာအတွက် ပင်ပန်းကြီးစွာ ရုန်းကန်ရကြပါတယ်။ တချို့ မိဘတွေ က ကိုယ့်ကလေးတွေ ကို ပညာတတ်ချင်လွန်းလို့ ..အခမဲ့ စာသင်ပေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ ကလေးတွေ ကို သွားအပ်ပြီး စာသင်စေပေမယ့် စီးပွားရေးအကြပ်တည်းတွေ ကြောင့် ရေရှည်တောင့်မခံနိုင်ကြပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ပဲ ကလေးတွေဟာ.. ဆင်းရဲလို့ပညာသင်ခွင့်မရ၊ ပညာ မတတ် တော့ အသိပညာ ဗဟုသုတပိုင်း မှာ အားနည်းပြီး ..အရွယ်လေးနဲနဲ ရလာတာနဲ့အရက်သောက်တတ်၊ ဘိန်းရှူတတ်၊ မိန်းကလေးတွေ ဆိုရင်လဲ စောစောစီးစီးနဲ့အိမ်ထောင်ကျ(ဒါမှမဟုတ်) အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ မှာ သွားပြီး အလုပ်လုပ်ကြရင်း ရေတိမ်နစ်ကြ…ဒီလိုနဲ့ ဘ၀ ကို စတေးသွားရတဲ့ လူငယ်တွေ ဒုနဲ့ ဒေး။
လက်လှမ်းမီဆုံး လူငယ်တွေ ဖြစ်တဲ့ တူ၊တူမတွေ ကို တောင် စာဖတ်နိုင်အောင်၊ စာဖတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် မဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အတွက် အပြစ် မကင်းဘူးလို့ကျွန်မ ခံစားမိတယ်…
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ တော့..မိဘတွေ အများစု ဟာ ကလေးတွေ စာဖတ်ချင်လာအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အားပေးကြတာကို မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ ဥပမာ..စားသောက်ဆိုင်ထဲ ရောက်လို့အစားသောက်တွေ မှာတော့မယ် ဆိုရင်..ကလေးတွေ ကို မီနူးကဒ်ပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြခိုင်းတာမျိုး၊ သတင်းစာ ကို မိသားစုလိုက် အတူဖတ်ကြတာမျိုး၊ သတင်းထဲပါတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု ကို ရွေးပြီး အတူ ဆွေးနွေးကြတာမျိုး၊ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ပုံပြင်စာအုပ်တွေ နဲ့ ကလေးတွေ ကို အသံထွက်ပြီး စာဖတ်ပြတာမျိုး စသဖြင့် စာပေဘက် ကို စိတ်ဝင်စားမှု ပိုစေဖို့ လမ်းခင်းပေးကြပါတယ်။
အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရဘက်ကလည်း ကလေးစာကြည့်တိုက်တွေ ဖွင့်လှစ်ပေးတာမျိုး၊ အထက်တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာရေးစနစ် ကို ကျင့် သုံးပေးတာမျိုး စတဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေ နဲ့အားပေးကြသလို၊ စာပေလောက ကို ကြည့်ပြန်ရင်လည်း ကလေးဖတ်ဖို့ စာအုပ်မျိုးစုံ ကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
လူကြီးတွေက.. “ငါ့ဘာသာ”…. “ငါ့ပါတီ”… “ငါ့စီးပွားရေး””ငါ့မြေကွက်” ..စသဖြင့် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေဆဲ…..
စာရေးဆရာတွေ ကလည်း.. လူကြီးတွေ ကို ပညာပေးဖို့ ဆုံးမ စာအုပ်တွေ တောင် ရေးလို့မဆုံးနိုင်ဖြစ်နေ သေးသမို့ ကလေးတွေ အတွက် စာအုပ် မရေးနိုင်သေးဖြစ်နေဆဲ…
ဒီလိုနဲ့ … လယ်ကွင်းတွေ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ကလေးအလုပ်သမားတွေ များသထက် များလာဆဲ…
မီးပွိုင့်တွေနားမှာ ဖိနပ်မပါ ခြေဗလာနဲ့ ပန်းရောင်းနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ တိုးလာနေဆဲ…
စာရေးခြင်း အနုပညာကို တတ်မြောက်တဲ့ စာရေးသူတွေ အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရ့ဲ အနာဂတ် ဖြစ်တဲ့ မျိုးဆက်သစ် ကလေး ငယ်တွေ အတွက် စာပေတွေ မရေးသားပေးနိုင် သရွေ့ …”ကလောင်ပီတိ ချို မြိန်၏” လို့ပြောဖို့ မသင့်သေးတဲ့ အတွက် ..ကျွန်မလဲ ကလောင်တစ် ချောင်းကို ကိုင် ပြီး ယောင်တောင်ပေါင်တောင် ဖြစ်နေဆဲ…
Photo: facebook (credit to original photographer)
(ကျွန်မကို သတိတရ တံခါးလာခေါက်တဲ့ အရီးလတ်အတွက် အသစ်မရေးအားသေးလို့မှတ်စုဟောင်းထဲက တစ်ပုဒ်ကို ကမန်းကတန်း ကောက်တင်လိုက်တာပါ။ ရွာသူရွာသားများအားလုံးကို သတိရကြောင်းပါ)
kai says: ကျုပ်ကတော့.. စာကြည့်တိုက်က.. ကစားကွင်းက… ကျောင်းက.. အမေရိကန်ကလေးတွေတွေ့ရင်… ကြိမ်လုံးအောက်.. .အင်မတန်ငြိမ်တဲ့.. မြန်မာကလေးတွေ.. ပြေးပြေးမြင်မိတော့တာပဲ..
အိုဘယ့်… ဘက ပညာရေး..။
နောင်အနှစ် ၂၀တွင်.. အာဖဂန်နစ်စတန်ဖြစ်လတံ့…။
မစုဥာဏ် says: မြန်မာပြည်က ခါးသီးတဲ့ အမှန်တရားတွေ ပေါ့ ရှင်
ကျွန်မတို့ အခမဲ့ ဆေးခန်းဖွင့်ထားပေးတဲ့ ရန်ကုန် အောင်ဇေယျာမင်း အခမဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်း တခုတည်းမှာတောင် ကျောင်းသားပေါင်း ၂၀၀၀ နီးပါးရှိတယ်။
အလှူရှင် အရမ်းပါးလို့ ဆန်တွေ မလုံလောက်တဲ့ အခါ ကျောင်းနေ ကျောင်းသားလေးတွေ ကို ကိုရင် ၀တ်ခိုင်းပြီး ဆွမ်းခံခိုင်းရတဲ့ အကြောင်း ဘုန်းဘုန်းက ပြောပြဖူးပါတယ်။
ကလေးရွယ်ဆိုတော့ သူတို့ ခမျာ မ၀တ်ချင်တဲ့ သူတွေ လဲ ရှိရင် ရှိမှာပဲ။ ဗုဒဘာသာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်သွားမယ့် ကလေးတွေ ရှိနိုင်သလို ၀မ်းရေးအရ ကိုးကွယ်လိုက်ရတဲ့ ကလေးတွေ လဲ ရှိနိုင်တာပဲ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလဲ ကျောင်းမှာ ခရစ်ယာန်လို ဆုတောင်းတာတို့ ၊ ဘုရားသီချင်းကို အသားပေးသင်ပေးတဲ့ ကျောင်းတွေလဲ ရှိတာပါပဲ။
ကျမတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် ကလေးတွေ ကို သူတို့ ဘာသာ စူးစမ်းလေ့လာပြီး တကယ်သက်ဝင်တဲ့ ဘာသာရေးကို ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။
Ma Ma says: အသစ်မရေးနိုင်သေးလို့ အဟောင်းတင်ပေးတာလည်း ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ အရောင်လေးတွေနဲ့ ကီးဘုတ်ကြည့်ပြီး သူ့အရွယ်နဲ့သူ အဆင်ပြေအောင် စဉ်းစားပေးခံရတဲ့ နိုင်ငံသားကလေးလေးတွေကို အားကျမိတယ်။
ဘာသာရေးတစ်ဖက်စွန်းရောက်အောင် ကလေးတွေကို မှားယွင်းစွာဘရိန်းဝပ်လုပ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ရင် သဂျီးပြောသလို ဖြစ်သွားမယ်။
အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ စစ်မှန်တဲ့ ဘာသာအယူဝါဒကို ဖြူစင်စွာယုံကြည်ကြည်ညိုတတ်အောင် သင်ကြားပြသဆုံးမပေးတာမျိုးကိုတော့ ကလေးဘ၀ကတည်းက သန္ဓေတည်အောင် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
မစုဥာဏ် says: တဘက်စွန်းရောက်တဲ့ ဘာသာရေး ယုံကြည်သူ လူတစ်စုကြောင့် တကမာလုံး စိတ်ဆင်းရဲ ကြတာ မျက်မြင်ပဲမို့မမပြောသလို ဖြူစင်စွာယုံကြည်တတ်အောင် သင်ကြားပြသဖို့ (အထူးသဖြင့် နုနယ်သူ ကလေးတွေ အတွက်) သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ပြောရရင် ကိုယ်တွေငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေပါ။ အခုခေတ်ကလေးတွေကတော့ ရာခိုင်အနည်းငယ်သာ ခံစားခွင့်ရကြပါတယ်။ လူချမ်းသာတွေအချို့ပေါ့။
မစုဥာဏ် says: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလို တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ မူလတန်း ကနေ အထက်တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ အတွက်ရော၊ စာကြည့်တိုက်တွေ မှာ အခမဲ့ စာအုပ်ငှားခွင့် ကွန်ပျူတာသုံးခွင့်တွေ ပေးထားတော့ ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးတွေလဲ သုံးနိုင်ကြတာမို့ ကျမတော့ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရနဲ့ ပဲ ပိုသက်ဆိုင်တယ် ထင်တာပါပဲ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟိုးအရင်ခေတ်တွေက တည်းက ကလေးဆိုတာ ကျောင်းစာဘဲ ဖတ်ရမယ်လို့ လူကြီးတွေက တရားသေသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် က မောင်ခွေးဘို့ကဗျာများနဲ့ ကလေးတွေအတွက်တာဝန်ကျေခဲ့သလို
ကာတွန်းဦအောင်ရှိန်ကလည်း ကလေးများအကြိုက် ကာတွန်းတွေဖန်တီးပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
မိုးသောက်ပန်း ဆိုတာတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဖန်တီးပေးခဲ့ကြဘူးပါတယ်.
အခုချိန်မှာ ဘာလုပ်လုပ် စီးပွုားရေးဈေးကွက်နဲ့ ဘဲ တွက်လုပ်ကြတော့
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကလေးတွေကို “ဓမ္မစကူး ” ကိုပို့ပေးတာတွေ့ရပါတယ်.။
(ကျနော်အမြင်ကတော့ ဒီ ဓမ္မစကူး ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို မနှစ်သက်ပါဘူး။
သူများဘာသာက ဆန်းဒေးစကူး ကို အတုယူပြီး ပြီး ပေးထားတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
မြန်မာ စာလုံး တစ်လုံးမှ မပါ ။
ဒီလောက်ဝေါဟာရ ကြွယ်တဲ့ မြန်မာဘာသာမှာသူများစာလုံးတွေဘဲဖြစ်နေလို့ ဖတ်ရတာထောင့်တောင့်တောင်)
လမ်းပေါ်မှာလျောက်ပြီး သွားချင်ရာ သွားနေမနေကြဘဲ
ကလေးတွေကို စုပေးနိုင်တဲ့ “တရားကျောင်း”လေးမှာကလေးတွေ တစုတဝေးရှိနေခဲ့ရင်
သူတို့ လေးတွေ သိဘို့ လိုအပ်တဲ့
ကလေးတွေကို မစုနိုင်ဘဲနဲ့တော့ ဘာမှ သင်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်။
မစုဥာဏ် says: ကိုပေါက်ပြောသလိုပဲ မြန်မာပြည်က ကလေးတွေ တော်တော်များများက ၀မ်းရေးကို ဦးစားပေးနေရတာမို့ စူးစမ်းလေ့လာဖို့ ဘက်ကို အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူး။ နယူးယောက်ကနေ လူငယ်တစ်ဖွဲ့ က Mobile classroom ဆိုပြီး ရန်ကုန်မှာရှုိတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့ စားသောက်ဆိုင်တို့ မှာ လုပ်နေတဲ့ ကလေးတွေ အတွက် စာလိုက်သင်ပေးနေတာ၊ ဒီ ၂ နှစ်ကျော်အတွင်း ကျေုာင်းသားဥိးရေလဲ တိုးလာလို့ သူတို့ တွေ ကားတောင် ထပ်တိုးချဲ့ ကြရတာကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် ကလေးတွေ မှာ သင်ကြားချင်စိတ်ရှိကြတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ဆို တနေကုန် အလုပ်ပင်ပန်းထားလို့ သူတို့ တွေ နားနေနိုင်တာပဲ၊ ဘယ်သူမှ လဲ အတင်း ကြပ် မသင်ခိုင်းပဲနဲ့ သူတို့ ကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလား လာသင်ကြတယ်ဆိုပဲ။
aye.kk says: မစုဥာဏ်ရဲ့ချိုမြိန်တဲ့စာ
ကိုပေါက်ရဲ့ comment လည်းဖတ်ပြီး
မစုဥာဏ် says: @ aye.kk
အချိန်ပေးဖတ်တဲ့ အတွက်ရော ကွန်မန့် ရေးပေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မြစပဲရိုး says: မအားတဲ့ ကြားက တင်ပေးတဲ့ ပို့စ်လေး အတွက် တကယ်ဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မစုဉာဏ်။
အဲဒီကနေ တွေးစရာတွေ အများကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက် က မကောင်းတဲ့ လူ တစ်ချို့ ကို ဆွဲထုတ် အပြစ် တင် နေမိ တာ ကိုယ်တိုင် အပါအဝင် လို့ ဝန်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အတွင်း ကို အသေအချာ နှိုက်ဝင်ကြည့် ရင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ပညာရှင် တွေ အများကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နားမှာ ဝိုင်းရံ နေတာပါ။
ဥပမာ – တစ်နိုင်ငံလုံး အတွက် ထိရောက်တဲ့ စာကြည့်တိုက် တွေ ဖြစ်ဖို့ နိုင်ငံတကာ အဆင့် public libraries အတွက် အကြံပြု နိုင်သူ တွေ အနီးကပ် ရှိနေတယ်။
သူတို့ နာမည်ကိုလဲ ပြောရင်သိကြမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ မရှိဘဲ နိုင်ငံအဝှမ်း လုပ်လို့ မရ တာမို့ သူ့နေရာ ကွက်ကွက်လေးဘဲ လုပ်ပေးနေခွင့်ရတာ သူလဲ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
ဒါမျိုး ပညာရှင်တွေ အကြောင်း ကို မသိကြတာလား။ မသိဟန်ဆောင်နေလား။
သေချာတာ က အဲဒီလို လူ တွေ က သူတို့ လုပ်နေတာ တွေ ကို အသံကောင်းဟစ်မပြဘူး။
အခုတော့ လူတစ်ချို့က သူတို့ ရဲ့ overall မကြည့်တတ် တဲ့ အရည်အချင်း နဲ့ ကိုယ့် မှီရာ ကွက်ကွက် လေး ကို ဘဲ ကြည့်ပြီး အသင်းလိုက် ကို ဝါးလုံးရှည်ရမ်းပြီး ဝေဖန်ရေး လုပ်လာ နေကြတာ ကိုတော့ မကြိုက်ဘူး။
ဒီအချိန်မှာ စာသင်ခွင့်မရ တဲ့ အပြင် ထမင်းတောင် ဝဝ မစားရတဲ့၊ အရွယ်နဲ့ မလိုက် လမ်းကြမ်းလျှောက်နေရတဲ့ ကလေး တွေ အားလုံး အတွက် ကိုယ့်အတ္တတွေ အားလုံး ကို နောက်ချန်ပြီး တစ်သားထဲ စုစည်း နေရတော့ မဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပြီ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ က အစ ပညာရပ်ပိုင်း အမြင်ကျယ်နိုင်ဖို့ အထိ အဆင့်မြင့်အောင် မြှင့်ထားကြပါ။
ဒါမှ သူများ နဲ့ ယှဉ်ရင် နောက်မကျန်တဲ့ အမြင် နဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြား မှု လုပ်နိုင်မှာမို့ပါ။
အသင်းတစ်သင်း မှာ လူကောင်း တွေ ရှိနေလဲ ထိပ်တန်းမှာ စီး နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး က သုံးမရအောင် ညံ့ ပြီး စိတ်ဓာတ် မကောင်း ရင် အဲဒီ အသင်း ကို အားကိုး လို့ မရတာ လက်တွေ့ဘဲ။
အသင်းတစ်သင်း မှာ လူဆိုး တွေ ရှိနေလဲ ထိပ်တန်းမှာ စီး နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး က အရမ်းကို တော်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကောင်း ရင် အဲဒီ အသင်း ကို အားကိုး လို့ရမှာ အသေချာပါဘဲ။
မှားတဲ့ လောဂျစ် ဆိုလဲ အမှားပေါ့။
ဒီကလေး တွေ ရဲ့ အနာဂါတ်လှပနိုင်ရေး ကို မျှော်တွေး ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သာ ပံ့ပိုးကြပါ။
သူ့စကား ကို သာ အခုချိန်မှာ နားထောင်ကြပါ။
(ပို့စ် အကြောင်း က ချော်သွားရင် စောဒီးပါ မစုဉာဏ် ရေ)
ဓာတ်ပုံထဲ က ကလေးလေး ကို “ကျောင်းနေလား” လို့ မေးမိလိုက်လို့ ငိုသွားတာလို့ ပြောတာဘဲ။
(အင်တာနက် ပုံပြင်မို့ မှန်မမှန်တော့ မသိ)
အဲဒီလို ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေး တွေ အတွက် အရီး လဲ trauma ရှိခဲ့ဘူးတယ်။
ဒါနဲ့ ရွာထဲမှာ ဒီ စကား တွေ ပြောနေ၊ ရေးနေတာပါ မစုဉာဏ်ရေ။
တို့တွေ ရဲ့ ကလောင် တွေ တစ်နေ့တော့ ချိုမြိန်လာမယ်လို့ အိမ်မက် ထားတာပါဘဲ။
မဖြစ်နိုင်တဲ့ အိမ်မက်လား၊ ဖြစ်လာမဲ့ အိမ်မက်လား အခုချိန်ထိ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတုန်းဘဲ။
မစုဥာဏ် says: အရီးပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်။
အခုတလော NLD အမတ်လောင်း အရွေးမခံရတာတွေ ကို မကျေနပ်ကြလို့ ဒေါ်စုကို ၀ိုင်းပြီး ဝေဖန်ကြတာ၊ တိုက်ခိုက်ကြတာတွေ
အများ ကြိးတွေ့ နေရတယ်။ ဝေဖန်သူတွေက သူတို့ ရဲ့ သဘောထားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုဝေဖန်ခွင့် ရှိကြသမို့ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာလဲ လူထဲက လူတွေ မို့ မှားကြ၊ အားနည်းကြတာတွေ ရှိမှာ အသေချာပါ။ ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်စုထက်ပိုကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင် ၊ မြန်မာ ပြည် အပေါ်စေတနာထားတဲ့ ခေါင်းဆောင် ၊ နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံမှုရတဲ့ ခေါင်းဆောင် မရှိသေးတဲ့ အတွက် သူ့ မှာ တကယ် အားနည်းနေရင်တောင် ၀န်းရံရမယ့် အချိန်လို့ မြင်ပါတယ်။
မဟုတ်ရင် ဘက်ပေါင်းစုံနိမ့်ကျနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေက ဒီထက်ပိုဆိုးဖို့ ပဲရှိတော့တာ။
ကျမတော့ ကလေးတွေ တော်တော်များများ ပညာသင်ခွင့်မရတာ တခုတည်းနဲ့ တင် ဒီအစိုးရကို နောက်ထပ် အုပ်ချုပ်ဖို့ အခွင့် အရေးမပေးသင့်တော့ဘူးလို့ ထင်တာပဲ
ဇီဇီခင်ဇော် says: စဉ်းစားကြည့်ရင် အဲဒီ တုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့ ဂျန်နရေးရှင်းလက်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဆက်ပြီးရောက်မှာ။
ဒီ အချိန်မှာ ပညာရေးမမြှင့်နိုင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက သွားပြီ။
ခုကို လူငယ်တွေ စာမဖတ်ဘူးး
စာရေးသူဆိုလိုရင်းတွေကို နားမလည်ပဲ အရင် ဆဲ ကုန်ပြီ။
ကဘာမပျက်ခင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆို တာ အရင် ပျောက်နိုင်တယ်။
မစုဥာဏ် says: ဟုတ်ပါ့ရှင်။ စာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကို နားမလည်ပဲ အလွတ်ကျက်နည်းနဲ့ မှတ်နေရတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ … ရှမ်းပြည်က တူမ တယောက်ကဆို မိဖုရားဖွားစောကျောက်စာထဲက ” အဆင်းလှသော အသံသာသော” စတဲ့ ဆုတောင်းထဲက အဆင်းလှသော ကို “လှလှလေး ဆင်းတယ်” လို့ နားလည်သတဲ့။ ရင်လေးစရာပါ။
kai says: https://www.facebook.com/ayeayesoentp/posts/1629241650676949?fref=nf&pnref=story
” အန်တီ အိုဗာတင်း ၂ဗူး ပေးပါ ”
စက္ကူဗူးကြီး ထင်၍ ပေးလိုက်သည်
” မဟုတ်ဘူး ပုလင်းပြောတာ ”
” ဟဲ့ ဒါ ပုလင်းလို့ခေါ်တယ် ဗူး မဟုတ်ဘူး ”
” အန်တီ သမီးကို အချိုရည် ၂ပုလင်း ”
Max ၂ပုလင်း ထုတ်ပေးလိုက်သည်
” အာ မဟုတ်ဘူးလေ အန်တီရဲ့ ကော်ဗူးပြောတာ”
” ဟဲ့ ဒါကို ဗူးလို့ခေါ်တယ် သမီးက ပုလင်းလို့ပြောတာကိုး ဟဲ့ ”
” အန်တီ သမီးကို ပစ်တိုင်းထောင် အကြောပြေဆေး ပေးပါ”
” ဟင် ဗမာဆေးကြီး သမီးဝယ်တာ အင်္ဂလိပ်ဆေးပါ ”
” ဟဲ့ ပစ်တိုင်းထောင် အကြောပြေဆေး ဆိုမှတော့ အင်္ဂလိပ်ဆေး ဖြစ်ပါ့မလား ဟဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး ”
” မသိဘူးလေ အမေက ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာ သမီးက အင်္ဂလိပ်ဆေး ထင်နေတာ ”
ကြည့်လိုက်တော့ ဆယ်တန်း နှစ်ခါကျ
” အန်တီ မြေပဲ မရွေး မရှိဘူးလား ”
” မရှိဘူး ”
” ရှိပါတယ် ဟိုနေ့က သမီးဒီနားက ယူသွားတာလေ ”
” အော် ရွှေပင်ငွေပင် လား ”
” ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ”
” ဟဲ့ အဲဒါ မြေပဲကွတ်ကီးလေ မြေပဲမရွေး မဟုတ်ဘူး စာလည်း ဖတ်ကြည့်ပါဦး သမီးရယ် ”
” အို သမီးက ဒါတွေ ဝါသနာမပါဘူး မဖတ်ချင်ဘူး ”
ဟင်း ဂမ်းမ ကျတာတောင် နည်းသေး
” အန်တီ ဘောပင် တစ်ဒါဇင်တဲ့ အဲဒါ သမီးဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ ”
” သမီး ဘယ်နှစ်တန်ထိ နေခဲ့လဲ ”
” ခုနှစ်တန်း ”
( ကျမဆိုင်က အလုပ်သမား တွေ တစ်ဒါဇင်မှာ ဘယ်လောက်ရှိမှန်း ဝင်လာသူတိုင်း မသိပါ ၈ တန်းသမားတောင် မသိကြပါ)
” မမ တစ်ထုတ်ပေးပါ”
စိတ်ထဲက ကလိကလိ ထိန်းမရတော့
” ဆရာမ မာမားလေ မမ မဟုတ်ဘူး ပေါင်းရေးထားတာာလေ ခွဲရေးတာမှ မဟုတ်တာ ”
” မသိဘူးအေ ကျုပ်က မမပဲခေါ်တာ”
” ဆရာမ ကျောင်းမှာ ဘာသသင်တာလဲ”
” ၇ တန်းသင်္ချာ ”
” ငါ့ကို ကေဟီး တစ်ထုတ်လောက် ”
” ပိုးတီ မုန့်လေး လေ ”
” အော် K .Hi ”
” ဆရာမ ကျောင်းမှာ ဘာသင်လဲ”
” ဆယ်တန်း အင်္ဂလိပ် ”
” သမီးကို ဆန်းဌေး ( သူက အာာ့လိုပဲခေါ်သည်) အနီ တစ်ထုတ်”
” ကော်ဖီလာား လ္ဘက်ရည်လား”
” မသိဘူး အဖေသောက်တာ ”
” ဟဲ့ ဆယ်တန်းရောက်နေပြီ ကော်ဖီလား လ္ဘက်ရည်လာား ဖတ်တတ်ရမှာပေါ့ အမှုမဲ့ မနေနဲ့ ဖတ်”
လာဝယ်သည့်ကလေးမှမဟုတ် ကလေးတိုင်းနီးပါး လူကြီးတွေလည်း ပါ
” အမ ကျမကို Max အဝါရောင် တစ်ဗူး ”
” ဆရာမ Max က အဝါ မထွက်ဘူးလေ ”
” လိမ္မော်ရည်ကို ပြောတာပါ”
လိမ္မော်ရည်ဆိုမှ လိမ္မော်ရောင်ပေါ့ ဆရာမရဲ့
သူကား ဘွဲ့ပူပူနွေးနွေး ရ မူပြဆရာမ
” မကြီး သမီးကို premier တစ်ထုပ်”
” ဟုတ်ပါပြီ သူကများတယ်
်3in 1လား
espresso လား ”
” မသိဘူး အနီထုပ်ကလေး ”
” အော3in 1″
ကိုယ်သောက်သည့် ကော်ဖီလေးတောင် ကိုယ် မသိ”
” ငါ့ကို တစ်ထောင်တန် တစ်ကတ်”
” ဘာကတ်လဲ ”
” ဟဲ့ နင်ပဲ အမြဲထည့်ပေးနေတာ နင်မမှတ်ထားဘူး လား”
” ဟာ ကျမမှာ အမလိုလူတွေ တစ်ပုံကြီး ဘယ်မှတ်မိနိူင်ပါ့မလဲ
အမတောင် အမဖုန်းနံပါတ် ဘာလဲ မသိမှတော့ ”
” အာ့ဆို ပြော ဘာရောင်လေးလည်း ”
” ပန်ကာပုံလေးနဲ့ အဝါရောင်”
” ပန်ကာဆို အပြာပါ အမရယ် တယ်လီနောပါ ”
” အေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် အဲဒါ”
အာ့မို့ ချစ်အစိုးရ လက်ထက် ပညာသင်လာခဲ့တဲ့
လူတွေနဲ့ စကာပြောရတာ အဆင်ကို မပြေဘူး
ကျမက အောက်စဖို့ဒ် ဆင်း
အများကြီး ရေးစရာ ကျန်ပါသေးသည်
စူးစမ်းဆင်ခြင်မှု လေ့လာသင်ယူလိုမှု အပိုင်းတွေပါ အားနည်း
ကျမလည်း အင်္ဂလိပ်စာ အသံထွက်မမှန်ပါ
ဆရာကို စော်ကားစကား မပြောလိုပါ
တစ်ကယ့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဆရာ ဆရာမများကို
ဘာသာာရပ်ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသူ ကို သင်ခိုင်းနေကြမှတော့
Alinsett @ Maung Thura says: .ရောင်စုံကီးဘုတ်လေး… သဘောကျမိတယ်..
kai says: လေးအောက်သမား.. ဓာတ်ပုံသမား.. ဗီဒီယိုအက်ဒီတာတွေ.. ရောင်စုံကီးဘုတ်တွေသုံးပါတယ်ဗျ..
ရောင်စုံကီးဘုတ်.. ရောင်စုံကီးဘုတ်.. တခု ၂၀..။ တခုနှစ်ဆယ်..။
Alinsett @ Maung Thura says: သူကြီး ပြတာလေး…ပိုတောင် လိုချင်မိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 45
မစုဥာဏ် says: သူကြီးက ရွာသူရွာသားများအား ရောင်စုံကီးဘုတ် ကို တစ်အိမ်တစ်လုံးစီ လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ကြားသိရကြောင်းး)
ကဲ.. ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး.. ယူကြစေဗျား..
(မှတ်ချက်။ ။တယောက်.. တအိမ်ထောင်.တခုသာ..)
ဦးကြောင်ကြီး says: .. မဆူညံ တပ်ကူသံ လာဘ်ဖူလျှံ ငှက်ဖြူ ပျံ
မစုဥာဏ် says: လာဘ်ဖူလျှံ ဆိုတော့ နောက် ထပ် စာပေဆု တစ်ခု (ရွာက မပေးရင်တောင် ဦးကြောင် ကြီးဆီက) ထပ်ရ မယ့် နိမိတ်လို့ ယူဆပါကြောင်း
Mike says: .အော်..မစုဥာဏ်ပြန်ပေါ်လာလို့ ၀မ်းသာပါ၏…
.စကားအတင်းစပ်…ကျုပ်ဆီမှာ မစုဥာဏ်ရထားတဲ့ .မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုလေးတောင်သောင်တင်နေသဗျာ
.ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်မှာအမျိုးတွေရှိနေရင် ကျနော့ကိုဆက်သွယ်ပြီးယူခိုင်းလို့ရပါတယ်
.သောင်းစိန် ၀၉၇၃၁၁၇၉၂၃ ပါဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 45
မစုဥာဏ် says: ကိုသောင်းစိန်..
ဆုကို သိမ်းထားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
စာပေဆုဆိုတာ တစ်ခါမှ မရခဲ့ဖူးလို့ ကျွန်မ အတွက် အင်မတန်မှ အဖိုးတန်တဲ့ ဆုလေးပါ။
ကျွန်မ သူငယ်ချင်းကို ယူခိုင်းလိုက်ပါမယ်။
Mike says: .အိုကေပါ မစုဥာဏ်ရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: အနော်လိုခြင်တဲ့ဆု ပါပါမိုက်ဆီမှာ ရှိလယ်.. အဲလာ …. ပေးမား
Shwe Ei says: -သဂျီးတစ်ယောက်လဲ ဘက ပညာရေး ဆိုတိုင်း
-ဘုန်းကြီး ကြိမ်လုံးကိုင်တာဘဲ ပြေးမြင်နေတော့တာဘဲ
-စာသင်ဖို့ ဆရာ ဆရာမ တွေကို လခပေးပြီး ငှားရပါတယ်ဆိုမှ
-သင်တာကလဲ အစိုးရစစ်စာမေးပွဲဝင်ဖြေလို့ရအောင်…အစိုးရက ထုတ်ထားတဲ့
-ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းလို ဟာမျိူးးက ပိတ်ရက်မှာ လာတက်သူရှိမှ
-သင်နိုင်တာ..ဒါတောင် ကျောင်းစာမပြီးရင် အချိန်ပို ခေါ်ရတာမျိုးးရှိသေးတယ်
-အစိုးရကျောင်းက ဆရာ ဆရာမ အများစုက ကျူရှင်တက်မှ စာသင်ပေးချင်တာမျိုးး
-ကျောင်းမှာ သင်ရိုးညွှန်းတန်းပြတ်အောင် အချိန်ပြည့်စာသင်တဲ့ ဆရာ ဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်
-စနစ်ကြောင့် မဟုတ်ဖူး သဂျီးရေ …
-လူဒေကျောင့် လူဒေကျောင့် ဘုန်းကြီးတွေစာသင်ကျောင်းဖွင့်နေရတာ… :P